India: Ny Vehivavy Sy Ireo Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2018 8:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Italiano, Swahili, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, English
Ity lahatsoratra ity dia anisany ampahany amin'ny antontan-kevitra manokana [amin'ny teny anglisy sahala amin'ireo vohikala sy blaogy voatanisa eto] natokan'ny Global Voices ho an'ireo fifidianana amin'ny ankapobeny tao India tamin'ny taona 2009
Hanao fifidianana solombavambahoaka ilay demokrasia tena goavana indrindra erantany, India, izay hanomboka afaka herinandro vitsivitsy. Ao anatina firenena iray izay ahitana mponina maihoatra ny iray lavitrisa, ny fifidianana solombavambahoaka dia fotoana iray hanapahana hevitra momba ny hoavin'ireo vondron-tombontsoa marobe, ny an'ireo antoko politika sy ny an'ny vahoaka. Miankina amin'io andro io ny fiainana izay hiainan'izy ireo mandritra ny dimy taona manaraka indray.
Ity fihaonana miloko ity no hivondronan'ireo vehivavy izay manolo-tena mba hanampy amin'ny fanentanana sy amin'ny fampiroboroboana sosialy ao anatin'ny tanànan'izy ireo
Sary nalefan'ny mckaysavage an-tambajotra teo amin'ny Flickr ary nampiasaina ny lisansa Creative Commons.
Ho an'ireo vehivavy indiana, izay hatry ny ela no tsy nanana ny toerany ara-dalàna tao amin'ny tokantranony, teo amin'ny toeram-piasany, na tamin'ireo izay manana ny fahefana, goavana ny zavakendrena ho entiin'ireo fifidianana ho avy ireo. Ny tahan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra eo amin'ny firenena (araka ny fanisàna tamin'ny taona 2001) dia 53,63% teo amin'ireo vehivavy raha toa 75,26% teo amin'ireo lehilahy, saingy tsy tena tapaka tanteraka ny fifandraisan'ireo vehivavy Indiana tamin'ny zotra politika. Mitombo ny tahan'ny fandraisana anjara ary vehivavy no mitondra an'ireo antoko malaza sasantsasany.
Na dia mihamaro hatrany aza ireo vehivavy mahatsapa ny zony handatsa-bato sy handray anjara amin'ny fiainana politika eo an-toerana, misy lahatsoratra iray milaza fa mety ho vitsy ireo vehivavy no ho voafidy ao amin'ny antenimieram-pirenena amin'ity taona ity.
Ny fiandaniana nataon'ny Lok Sabha faha-14 (Tranom-bahoaka na antenimieram-pirenen'ny Parlemantera indiana) tamin'ny lalàna iray mampiditra fetran'isa ho an'ny vehivavy hanatevina ny laharany dia nanosika ireo vehivavy marobe hirotsaka hsolo tena ireo antoko lehibe amin'ireny fifidianana ireny. Saingy ny fomba izay nifidianan'ireto farany ny kandidàn'izy ireo dia mampiseho fa ny politikam-pifidianana dia mijanona ho sehatra midadasika natokana ho an'ny lehilahy.
Tafiditra ao anatin'izany Sonia Gandhi, filohan'ny antoko vehivavy sivy monja hatreto no hita tao anaty lisitra, natolotry ny Kongresy, tamin'ireo kandidà manodidina ny 90 mikatsaka seza ao amin'ny Lok Sabha. Tsy nahitàna afatsy vehivavy 21 ny lisitr'ireo kandidà 232 an'ny BJP.
Ny Fiarahamientan'ny hery ankavia, izay niampanga ny Kaongresy toy ny BJP ho tsy misy finiavana politika manoloana ilay fetran'isa ho an'ny vehivavy, dia tsy nitondra afatsy vehivavy roa monja, raha dimy nandritra ireo fifidianana tamin'ny taona 2004, tamin'ireo kandidà 42 nalefa ho any amin'ny toeram-pamaharany tany Bengale andrefana.
Namoaka lahatsoratra iray i Samiya Anwar, vehivavy blaogera sady mpifidy, izay nilazàny momba an'ireo fifidianana ho avy, indrindra fa ny tao an-tanànany Hyderabad.
Betsaka kokoa ireo olana vahàna mikasika ny vehivavy nohon'ny an'ireo lehilahy. Tsy izany ve? Voalohany indrindra, eo ny resaka fiarovana ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina iainany. Marobe ireo vehivavy monina any amin'ny tanàna tranainy (Hyderabad) no tsy matoky polisy. Iharan'ny herisetra ao an-tokantrano sy ara-batana izy ireo nefa tsy afaka mitaraina akory. Mila rafitra iray isika izay hahafahan'ireo vehivavy manatona tsy amin-tahotra ny polisy. Tokony omena laharam-pahamehana ireo olana amin'ny tsy fisian-drano, ny fahatapahan'ny herinaratra matetika, ny loza eny an-dalambe ary ny fanararaotana ara-batana manjo ireo vehivavy any amin'ny toeram-piasàny.
Matetika voaresaka ny olana momba ireo foko sy saranga nandritra an'ity vanim-potoanan'ny fifidianana ity tao India. Miteny ny sasany hoe: “Mandatsa-bato ireo Indiana, voalohany indrindra arakaraka sy ho amin'ny foko sy saranga niavian'izy ireo”. Ny fizarazaràna an'ireo olona arakaraka ny foko sy saranga misy azy ireo, ary ny fampiasàna an'ireo vondrona ireo avy eo ho toy ny “vatom-pifidianana fiandry efa azo antenaina”, dia efa zavatra mahazatra.
Lazain'ilay blaogera Joshua Meah eo amin'ny blaogy Washington Note ny rafitr'ireo foko sy saranga ary ny fepetra iainan'ny vehivavy ao anaty politika indiana :
India n. (mety ho mpamari-toetra ihany koa angamba io teny io ?): ilay firenena izay ny zavatra mifanohitra rehetra dia manana anjara kely amin'ny fahamarinana ihany koa. Mbola io firenena io ihany izay no namokatra vehivavy marobe mpanao politika, tena matanjaka, efa ela be talohan'ny nandinihan'i Etazonia an'io resaka io – i Indira Gandhi no ohatra azo raisina. Na ankehitriny aza, ny Uttar Pradesh, fanjakana indiana be mponina indrindra ary misy mponina 130 tapitrisa, dia vehivavy avy amina foko dalit (saranga tena ambany indrindra ao India) no mitondra azy. Amin'ny fomba filaza ny fandrosoan'ny fitoviana ara-tsosialy, zavatra somary mampitampim-bava ihany koa ny fivoaran'ny demokrasia ao India, toy ny maha-mandrotika ny fo azy ireny.
Ny olana amin'ireo “vatom-pifidianana fiandry efa azo antenaina” no atrehan'i Vinod Sharma amin'ny alalan'ny fifanakalozan-dresaka noforonina an'eritreritra nifanaovanà vehivavy telo eo amin'ny fitondrana – Mayawati (lehiben'ny governemanta an'ny fanjakana Uttar Pradesh) izay Dalit (tsy fikitika), Maneka Gandhi (vinantovavin'i Indira Gandhi), mpikatroka mafana fo malaza ara-tsosialy sy mafana fo mpiaro ny zon'ny biby, ary Sonia Gandhi (izay efa zaobavin'i Maneka), filohan'ny antokon'ny Kongresy. Ity manaraka ity ny ampahany:
Sonia : Antoko nasionaly manana tantara be voninahitra ny antokon'ny Kongresy
Mayawati : Ary tsy manana ho avy.
Sonia : Aza miteny an'izany. Azafady. Mankarary fo izany. Mino isika fa hiverina eo amin'ny fitondrana amin'ny herintsika ihany
Mayawati : Marina ve? Henoy anie, tsy raharahako na fianakaviana Gandhi na raja na maharadja no niaviana. Raha ianao na ny zanakao lahy no loza mitatao ho an'ny tahirim-batoko, na amin'ny fomba ahoana na ahoana, samy alefako gadraina ianareo roa ireo.